Lifestyle Archives - Chelmo News Portal
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ လိုက်လုပ်ဖို့ ခက်ခဲလောက်တဲ့ ဝိတ်ချနည်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွေကို ပြန်လည်မျှဝေခဲ့တဲ့ BTS’s Jungkook
Army တွေရဲ့ အချစ်တော် BTS Jungkook ဟာဆိုရင် Physical Workout လုပ်ဆောင်နည်းတွေကို မနေ့ကသူ့ရဲ့ Livesteam လွှင့်နေစဉ်အတွင်းပရိတ်သတ်တစ်ယောက်က မေးမြန်းတာကြောင့် ပြန်လည်မျှဝေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် ၊ သူဟာမနက်တိုင်း Workout Equipment တွေမလိုအပ်ဘဲဘယ်လိုမျိုး လေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ပြီးဝိတ်ချခဲ့လဲ? အိမ်မှာ Workout လုပ်ချင်သူတွေအတွက် နည်းနည်းတော့ခက်ခဲတဲ့နည်းလမ်း ...
အိမ်သူသက်ထားအဖြစ် ရွေးချယ်သင့်သော Zodiac Sign လေးခု
ဒီ sign ပိုင်ရှင်လေးတွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားရတဲ့သူတွေကတော့ လက်မလွှတ်သင့်တော့ဘူးနော်။ ဒီလိုပြောလို့ အခြား sign တွေက မရွေးချယ်သင့်ဘူးလို့ ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်။ ချစ်တဲ့သူတိုင်း ပေါင်းဖက်နိုင်ကြပါစေလို့လည်း မင်မင်က ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ 1. Cancer ဒီ sign တွေကတော့ လူတစ်ယောက်ကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွယ်ငြိမိသွားပြီဆိုရင်‌တော့ ကိုယ်နဲ့သူနဲ့ကြား ဆက်ဆံရေးတွေ ...
နာမည်ကြီး K Drama Series တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Penthouse ရဲ့ Season3နောက်ဆုံး episodeမှာတော့
နိုဝင်ဘာလ (၁၉) ရက်နေ့မှာ SM Entertainment က သူတို့ရဲ့တရားဝင် ဝက်ဘ်ဆိုက်မှာ KAI ရဲ့ပထမဆုံး တစ်ကိုယ်တော် အယ်လ်ဘမ် “KAI” teaser ပုံရိပ်တွေကို ဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်။ Kai ရဲ့ Solo Album မှတော့ သီချင်း (၆)ပုဒ် ပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး ...
(၁) Gulf Kanawut TharnType The series နဲ့ နာမည်ကြီးတဲ့ Gulf Kanawut ကတော့ အင်ဂျင်နီယာနဲ့ နည်းပညာဆိုင်ရာ တက္ကသိုလ် King Mongkut’s University of Technology Thonburi ကနေ ဘွဲ့ရရှိခဲ့ပါတယ်။ https://www.instagram.com/p/CHC3pUnJBTc/?utm_source=ig_web_copy_link (၂) ...
TC Candler က‌ ထုတ်ပြန်တဲ့ ကမ္ဘာ့အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် စာရင်းမှာ ပါဝင်ခဲ့တဲ့ ပိုင်တံခွန် နဲ့ ဝတ်မှုန်ရွှေရည်
TC Candler က‌နေ ကမ္ဘာ့ အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် အမျိုးသား နဲ့ အမျိုးသမီး စာရင်းကို နှစ်စဉ် ထုတ်ပြန်နေကျ ဖြစ်ပါတယ်။ (၂ဝ၂ဝ) ခုနှစ် အတွက် အချောဆုံး မျက်နှာပိုင်ရှင် အဖြစ် သတ်မှတ်ခံရနိုင်ချေရှိတဲ့ ဆန်ခါတင်စာရင်း ကိုတော့ သူတို့ရဲ့ IG ...
Instagram ဟာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုတဲ့ ဆိုရှယ်မီဒီယာ စာမျက်နှာ တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေရဲ့ နေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ပရိတ်သတ်တွေလည်း သူတို့ရဲ့ နေ့စဉ် လှုပ်ရှားမှုတွေကို မြင်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ်။ Cristiano Ronaldo – 240 Million Followers Username ...
Photo Crd #Chelmo #ChelmoTeam
Relationship တစ်ခုရဲ့ (၈၃)ရာခိုင်နှုန်းလောက်က သူငယ်ချင်းကို ချစ်သူအဖြစ် ရွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ အချိန်ကြာကြာ ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းအဖြစ်ကနေ ချစ်သူအဖြစ်ကို ပြောင်းလိုက်တဲ့ အချိန်မှာ အစပိုင်းတော့ လက်တွဲရမှာ၊ ဖက်ရမှာရှက်တာတို့ ရှိတတ်ပါတယ်။ တကယ်တမ်း သူငယ်ချင်းကနေ ချစ်သူဖြစ်ဖို့ဆို စဉ်းစားရမှာက ပြတ်သွားခဲ့သည်ရှိသော် သူငယ်ချင်းရော၊ ချစ်သူရောပါ ...